Dzimwe nyaya dzebasa | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rubric: Zvimwe zvematongerwo enyika
Ndiani ari muteja wechikwata? Ndezvipi basa rebasa racho?
Iwe unoda kuziva kuti ndiani mutungamiri mukuru? Anoitei, mabasa ake chii! Chii chinotarisana nenyanzvi munharaunda ino? Pros uye njodzi dzebasa iri? Tichafara kukuudza!
Ndezvipi zvidzidzo zvichange zvichitsvaga mumakore e5? Yakatsvaga maitiro mune ramangwana
Musati mumwe nomumwe apedza chikoro chechikoro, nokukurumidza kana kuti gare gare mubvunzo unomuka wekuti ndiani aenderere mberi achidzidza. Zvechokwadi, isu hatina hanya nevanoropafadzwa, avo kubva pazera remakore vachiratidza tarenda ye ...
Mutariri weAcomputer: basa rekuita. Nhoroondo-maneja anorevei uye sei?
Unhu hwebasa rakapiwa hunofungidzirwa nekambani imwe neimwe seimwe zviratidzo zvekugutsikana kwekambani nayo. Zvechokwadi, zvakaoma chaizvo kukwezva vatengi, asi zvimwe basa rakawanda nderekurichengeta. Zvose izvi zvinowanzo ...
Varume vashandi: rondedzero. Varume nevakadzikadzi mabasa
Makumi makumi matatu adarika, vese vakomana vakarota kuva vastroni, vatyairi, mapurisa. Zvaitendwa kuti idzi dzaingova dzidziso dzevanhu, asi mudzidzisi kana mudzidzisi aiva mukadzi. Iye zvino ...
Shanda se postman: kuongorora, zvikamu uye basa rekuita
Vamwe vadzidzi uye vana vechikoro vane hanya nebasa reomumiriri. Kuongorora basa iri rinowana zvakasiyana-siyana. Asi kazhinji, vane zvinyorwa zvishoma. Sei Chii chinofanira kuitwa nemumiririri? Basa iri ripi rinoitwa nemushandi uyu?
Ndiani anonzi oilman? Shingairo "oilman": tsanangudzo, zvinyanzwisisiro zvekudzidzisa uye chokwadi chinonakidza
Fyodor Dostoevsky mukuru wechikoro akabudisa mutsara weuporofita achiti: "Munguva yemberi, vashandi vekarosene vachatonga nyika." Kufanana nemakaroti ose, aive akarurama. Nyika ine mazamu akawanda uye asingasviki mafuta uye gas reserves inogona ...
Zvinotarisirwa zvevatengesi vekutengesa zvekuvandudza. Zvinotarisirwa zveimwe nzvimbo yekutengesa maneja
Mutengesi wekutengesa inzvimbo yakakurumbira uye yakatsvakwa. Ndeapi mabasa evatengesi vekutengesa? Nzira yekuita sei tsvaga yakanaka? Chii chinoitika munharaunda iyi kunyanya? Ngatitarise pamibvunzo iyi yose ...
Ndeipi basa? Aina dzebasa. Mitauro uye zvikamu zvebhizimisi basa
Munhu wose anoedza kuratidza hupenyu hwakanaka hwekugara. Asi nokuti mari haigoni muhomwe yedu. Kuti uwane mari, iwe unofanira kuzvipira kune basa rako, ude ...
Mutengesi Wemagetsi: Job Description
Ichi chinyorwa chinotarisa pane imwe yehunyanzvi hwekuita mabasa. Commodity operator - basa rakakosha uye rakaoma. Zvese zvimiro zveiri basa zvichatsanangurwa pazasi. Ndiani Commodity ...
Ndeipi mibvunzo inobvunzwa mubvunzurudzo? Recruitment
Basa ibasa rinonyanya kukosha muupenyu kune chero munhu upi noupi. Iyi ndiyo nguva apo iwe unotanga kuita chimwe chinhu chinotarisirwa, uchiunza rubatsiro rwehuruzhinji, kutora danho rokuronga kuguma kwako, zuva rako rokubata. For ...
Nzira yekuita sei muiti wevashandi: kupi kutanga, kupi kwaunodzidza? Mafashoni
Mazuva ano, maitiro mashoma kupfuura mamwe ose anofananidzwa nekunaka uye mhizha yemafashoni, nokuti anenge anenge ari oga anoedza kutarisa. Kuti uite izvi, haugone kuita kunze kwevashandi mumunda we cosmetology. Kunze kwe ...
Ndiyo basa kuMcDonald's rakabvumidzwa kubva mumakore 16?
Vazhinji vevechiri kuyaruka vanofarira kuzera kwemakore avabvumirwe kushanda paMcDonalds: kubva kune 16 makore kana kune imwe nguva. Mutemo unoti chii? Munyika imwe neimwe, mune zvimwe zviito zvepamutemo zvinodzora basa ...
Zviitiko zvakabatana nehupfumi nemari: urongwa. Ndezvipi zvidzidzo zvakabatana nehupfumi?
Nhasi mumusika wevashandi, zvikoro zvakabatana nehupfumi zvine basa rinokosha. Iyi nharaunda yakawanda kwazvo zvokuti iyo inovhara inenge yese zvikamu zvemabasa evanhu. Tsvaga zvipi zvedzidzo zvakabatana nehupfumi? Ngatisimirei ...
Nzira yekuenda kumubatsiri? Zvikamu zvose zvekukunda nyika yekutonga
Mubvunzo wekuti ungawana sei basa pahofisi yepuresi unonetseka nemafungiro emagweta mazhinji. Chokutanga, nzvimbo ino yakakurumbira, iyo inobatsira pakunzvimbo yemunhu. Uye rwechipiri, mubhadharo wemushandi anokubvumira kurarama zvakanaka chaizvo ...
Tsanangudzo yeJobho: Mubatsiri Mukuru weSangano
Sangano rakakura idambudziko rakawanda. Musoro wesangano haungangove munguva kwese kupi, kunyangwe nerubatsiro rwevamiriri. Kuronga zuva nenzira chaiyo, kwete kukanganwa chero chinhu, kugovera uye kudzora basa, maneja anoda mubatsiri. Than ...
Mari yehupfumi ndiyo basa remangwana
Munyika yemazuva ano, mamiriro emari emakambani mazhinji, mabhizimisi maduku uye makuru ezvokutengeserana ave avepo kwenguva refu pamusika uye akatora niche yavo, inonyanyisa. Izvo zvose zvinokanganisa nguva dzose dzedzidzo ...
Mutungamiriri - ndiani uyu? Professional Administrator Responsibilities
Mutengi wezuva ranhasi anonyanya kusarudza nezvehutano hwehupi hupi hwakapiwa kwaari. Nokuti nzvimbo iyi inoramba ichivandudzwa. Inowanzozivikanwa inzvimbo yehurumende. Saka, nhasi, zvizhinji zvezvitoro, mapoka, ma saloni ane ...
Computer Related Relations: List
Funga nezvebasa rakabatana nekombiyuta. Izvo mazita avo akawandisa. Zvisinei, kunyora zvinhu zvose hazvina maturo. Pane kudaro, tinotsanangura yakakurumbira uye yakavimbiswa. Pashure pezvose, izvi chete zvinogona kuitika ...
Shingairo "Mutungamiri": tsanangudzo, zvinotsigira uye zvinotyisa
Mhizha, varaidzo mune mafirimu, zviratidzo, mitambo, maitiro ehutano nezvimwe zvakave zvakasimbiswa muupenyu hwedu. Iye zvino hatigoni kufungidzira kuti tingararama sei uye ...
Jobho anorondedzera musoro weyo nzvimbo. Jobho anorondedzera musoro weimba yekuvaka
Zviri nyore kwazvo kushanda pakugadzira apo kwete vasi pasi chete, asiwo mameneja pachavo vanoziva zvakajeka mabasa avo. Zvizhinji zvebhizimisi zvinowanzogoverwa mumasangano kana nzvimbo dzakatsanangurwa zvakanaka ...
peji 1 peji 2 ... peji 21 Next Page
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,542 masekondi.